Vokatra mavitrika |
Fotoana famoahana: 10-15-2020
Ny boaty fitsaboana plastika (antsoina koa hoe boaty fitsaboana) na boaty fitsaboana plastika, dia be mpampiasa any amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana. Ny azo ampiasaina amin'ny fitehirizana zava-mahadomelina, fitaovana ara-pahasalamana na hitondrana azy ireo hahitana marary. Boaty ara-pahasalamana, araka ny anarany, dia fitoeran'ny fitahirizana medi ...Hamaky bebe kokoa »
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostria maoderina dia mihamaro hatrany ireo fitaovana plastika tena tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra plastika koa dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany. Indrindra fa ny ampahany plastika marimarina kokoa no ampiasaina. Andao hizara aminao ny torohevitra momba ny faritra plastika marina ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hisafidianana ny mpanamboatra mould injection anao
Ny lasitra fanindronana dia karazana fitaovana amin'ny famolavolana faritra plastika na fitaovana. Ny firafitry ny lasitra fanindronana dia marina sy saro-takarina, ary tsy maintsy manana androm-piainana avo an'arivony tapitrisa ny tsindrona fanindronana. Izy io dia karazana fitaovana avo lenta, ary ny kalitaony dia milalao a ...Hamaky bebe kokoa »